I-Pokémon Go yazisa ukuphucula kwimilo yomqeqeshi | I-Androidsis
I-Pokémon GO ibhengeza ukuphuculwa kweeMfazwe zabaQeqeshi
UEder Ferreño | | Imidlalo ye-Android, Lines Go
I-Pokémon GO ayiyeki ukuzisa utshintsho olubalulekileyo kwezi veki. Kutshanje i ukufika kwemowudi yefoto ye-AR, ukongeza ekwaziseni uthotho lotshintsho kwi iimfazwe zabaqeqeshi. Kule meko, umdlalo odumileyo waseNiantic ubhengeza ukwaziswa kophuculo lweenkcukacha manani kwiiMfazwe zoQeqesho. Uphuculo oluzayo kuhlaziyo olutsha lomdlalo.
Njengoko sele ifundiwe, inkampani iqinisekisile ukuba ukusukela ngoku, kwiPokémon GO, ezinye Uhlaselo oluhlawulisiweyo luya kuba nakho ukubangela ukonyuswa komthetho. Ukongeza, olu phuculo luya kuqhubeka kwiPokémon echaphazelekayo ide inyamalale. Yile nto bayibhengezayo besuka eNiantic.
Umdlalo ulungiselela ukwazisa uthotho lohlaziyo kule midlalo yomqeqeshi, njengoko kwaziwa njalo. INiantic izokwazisa amanqaku amatsha kubo kwiiveki ezizayo. Ke uhlaziyo olwahlukileyo kulindeleke kulo mba kwiPokémon GO.
Ke ngoko, abadlali baceliwe baya kunika ingqalelo kwezi veki zizayo. U-Niantic uzama ukuphefumla ubomi obutsha kulo mdlalo iinyanga ezimbalwa, obusoloko uthengisa kwimarike iminyaka embalwa ngoku. Ngaphandle koko, iseyeminye yemidlalo leyo ingeniso engaphezulu eveliswe kwi-Android, njengoko kwakunokwenzeka ukwazi kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Imidlalo yabaqeqeshi iye yaba yenye yeenkwenkwezi kwiPokémon GO okoko wafika ekwindla. Bakhonze ukunika intshukumisa entsha kukuthandwa, ikakhulu kuba ibingumsebenzi ofunwa ngabasebenzisi bomdlalo ixesha elide. Ke ayothusi into yokuba iNiantic ifuna ukwenza uphuculo.
Okwangoku asazi ukuba olunye uhlaziyo luya kufika nini. UNiantic ucele abadlali bePokémon GO ukuba baphaphe Ekufikeni kwezi zinto zintsha, ekufuneka zenziwe kwiiveki ezimbalwa ezizayo. Ke ngoko, siya kuzimamela ezi veki zizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Pokémon GO ibhengeza ukuphuculwa kweeMfazwe zabaQeqeshi
IStardew Valley ngoku iyafumaneka kubhaliso lwangaphambili kuGoogle Play
Ukuqinisekisa uyilo, ixabiso kunye neempawu zeXiaomi Mi 9